के तपाईलाई निद्रा लाग्दैन ? यी हुन होमियोप्याथिक उपचार
होमियोप्याथिक उपचार :
१ ) कॉफिया – खुशीको कारण निद्रा न लाग्नु, लॉटरी पर्नु या कुनै यस्तो समाचार सुन्नु जसले गर्दा मन, मस्तिष्क यति उत्तेजित हुन्छ कि आँखा झपक्क हुदैन । मनमा एक पछि अर्को विचार आउदै जान्छ, मनमा विचारहरुको भीड नै लागेर आउछ, मानसिक उत्तेजना अत्याधिक हुनु, राति ३ बजे पछि पनि निद्रानै पर्दैन । यस प्रकारको लक्षणहरु देखिएमा यसको उपयोग गर्नु पर्दछ ।
२ ) जेल्सीमियम – यदि उत्तेजना (इमोशनल एक्साइटमेंट) को कारणले निद्रा पर्दैन भने या कुनै भय, आतंक या खराव समाचारको कारणले निद्रा लाग्दैन भने यस औषधिको उपयोग लाभदायक हुन्छ ।
३ ) इग्नेशिया – कुनै दु:खको कारणले निद्रा नलाग्नु , कुनै आफन्तको मृत्यु भएमा मन बढि दुखित भई निद्रा नलाग्नु । यस प्रकारको लक्षणमा यसको उपयोग लाभदायक मानिन्छ ।
४) काक्युलस– यदि रातिको समयमा धेरैबेर जाग्रमा बस्ने गर्नाले निद्रा पर्दैन, या जसको काम राति जागेर गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै- चौकिदार, नर्स, डाक्टर, कलसेन्टर, बिधुत प्राधिकरण, आर्मी आदि । उनीहरुलाई यदि अनिद्रा को समस्या देखिएमा यस औषधिको प्रयोग फायदाजनक हुन्छ ।
५ ) सल्फर – अलिकति पनि खस्र्याक- खुस्रुक आवाज हुने बितिकै निद्रा खुलि हाल्छ । निद्रा भगं भएपछि फेरि निद्रा लाग्दैन। बिरामीको निद्रा कुकुरको निद्रा समान हुन्छ भने यस्ता बिरामीको शरीरमा कहि न कहि जलन हुने गर्दछ । धेरै जसो पैताला पोल्ने हुन्छ । सुत्दा सिरकबाट खुट्टा बाहिर निकाल्ने गर्दछन् । यस प्रकारको लक्षणमा सल्फरको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
६ ) नक्सवोमिका – रोगीको मस्तिष्क आफ्नो कार्यलाई लिएर यति व्यस्त रहन्छ कि उ रात भर जागेर बस्छ । १२ बजे भन्दा अगाडि निद्रा नै पर्दैन । यदि निद्रा परिहाल्यो भनेपनि तीन-चार बजेतिर निद्रा खुलि हाल्छ । यसको एक घन्टा पछि उ फेरि निदाउछ । बिहान उठेपछि थकावट महशुस हुन्छ । यस्तो अनुभव हुन्छ कि राति सुत्दा पनि शरीरलाई आराम मिलेन । यस्तो लक्षणबाट पीड़ित रोगीले नक्सवोमिका औषधिको उपयोग गर्न सक्छन् ।
७) फॉसफोरस – रोगीलाई दिउँसोको समयमा निद्रा लागि रहन्छ । तर रात को समयमा निद्रा बिल्कुलै लाग्दैन । यस्ता लक्षणबाट पीड़ित रोगीको लागि फॉसफोरस औषधिको उपयोग गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
८) सिप्रिपीडियम – एकदमै खुशीको सामाचार सुनेर मस्तिष्कमा विचारहरुको बाढी लागेरआउछ । यस कारणले निद्रा पर्दैन। यस्ता रोगीहरुको अनिद्रा रोग ठीक गर्नको लागि सिप्रिपीडियम औषधि को मूल-अर्क 30 थोपा दिनमा दुई –तीन पटक १२ कप हल्का मनतातो पानीसँग सेवन गर्नु उपयोगी हुन्छ ।
९) पल्साटिला – रातको समयमा लगभग ११ देखि १२ बजेसम्म निद्रा नलाग्नु । ढिलो निद्रा पर्नु यस किसिमको लक्षण देखिएमा पल्सेटिला औषधि को प्रयोग गर्नु पर्छ ।
# नोट: उल्लेखित औषधिहरु आफ्नो स्थानीय होमियोप्याथिक चिकित्सकसँग सल्लाह लिइ सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ । चिकित्सकले तपाईको शारीरिक एवं मानसिक लक्षणहरुको आधारमा दिएको औषधिमा आवश्यकता अनुसार औषधिको मात्रा (डोज) बढाउन, घटाउन वा औषधि फेरबदल गर्न सक्नुका साथै तपाईलाई रोगनिवारण हेतु अन्य उपयोगि सल्लाह-सुझाव दिन सक्छन् ।
प्रदेश नम्वर १ भित्रै १७ जना कोरोना संक्रमित थपिए देशभरीमा संक्रमितको संख्या ४४४ पुग्यो
थप ९ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि,नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या २६७
डेंगु ज्वरो: संक्रमण र बच्न के गर्ने ?
नेपालमा एकै दिन ५७ जनामा कोरोना संक्रमण संक्रमितको संख्या १ सय ९१ पुग्यो
सुकुना बहुमुखी क्याम्पसमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
तातो दुधमा डुबेर दुई वर्षीय बालकको दर्दनाक अबस्था, आमाले रुँदै मागिन उपचारका लागि सहयोगको गुहार